50 taona nanaovana sokitra : Hampiseho ny fivoaran’ny asa tanany i Solomon Manan’Art -
AccueilVaovao Samihafa50 taona nanaovana sokitra : Hampiseho ny fivoaran’ny asa tanany i Solomon Manan’Art
31/01/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Malagasy manan-talenta eo amin’ny sary sokitra. Efa maherin’ny 50 taona no niangalian-dRakotomanana Solomon na Solomon Manan’Art io zava-kanto io, ka hampiseho ny fivoaran’ny asa tanany nandritra izay fotoana izay amin’ny alalan’ny fampirantiana hotanterahina etsy amin’ny Alliance Française Andavamamba (AFT) ny 5 ka hatramin’ny 24 febroary ho avy izao. « Tsy nitsahatra ny nikaroka aho tao anatin’izay 50 taona mahery izay, ary misy ny toeram-piasana manokana ho an’ny sary sokitra antsoina hoe Manan’Art, natsangako tany amin’ny taona 80 », araka ny fanazavany. « Entiko hampahafantarana ny besinimaro ny fivoaran’ny asa sokitra nataoko ity fampirantiana ity », hoy hatrany ny fanazavany. Saika mitondra aingam-panahy ho an’i Solomon Manan’Art amin’izao sary sokitra ataony ny zava-misy hitany amin’ny fiainana andavanandro. Ankoatra ny sary olona sy ny sary biby, dia manavanana ity mpanakanto ity ihany koa ny fanehoana amin’ny kisarisary ny zava-misy eo amin’ny fiainan’ny malagasy andavanandro.
Nanomboka ny taona 2000 no nitondra ainga vao teo amin’ny asa tanany i Solomon Manan’Art. « Avy amin’ny fianakaviana mpanao asa sokitra tany Ambositra aho, ary nobeazina sy nampianarina tamin’io tontolo io », hoy hatrany ny fanamarinana. « Ny hiala amin’ny fitovitovian’ny vokatra vita no nahatonga ahy nanao fikarohana manokana hiavahana amin’ny hafa sy hanehoana ny tena kolontsaina malagasy », hoy izy raha nitantara ny dingana nolalovany. Sehatra iray niavahan’i Solomon Manan’art ny « Siko-bontolo ». Ity farany dia fiangaliana ny sary sokitra araka ny aingam-panahiny amin’ireo hazo verivery sy tsy azo ampiasaina intsony, ka omeny endrika kanto. Ao anatin’ireny ireo hazo nazeran’ny rivodoza, ny fakan-kazo very etsy sy eroa…
Ankoatra ny fampirantiana ireo sangan’asany, dia hizara ny traikefany ihany koa i Solomon Manan’Art, ka hanolotra atrikasa ho an’ireo liana amin’io zava-kanto io ny 8 ka hatramin’ny 12 febroary 2018, ary ny 22 febroary kosa dia fifanakalozana amin’ireo mpanakanto eo amin’ny sehatry ny sary sokitra amin’ny « tafa miaraka amin’ny mpanakanto ». Hisy ihany koa ny fandefasana horonantsary mahakasika ity mpanakanto ity sy ny tontolon’ny asa tanany.